Download iMyanmar Dictionary for Android - Appszoom
by: I-Myanmar Co., Ltd. • 1.5K 8.2
# Fixed issue of crashing
# Updated search system
» iMyanmar Dictionary
English to Myanmar (Burmese) Dictionary
အင်္ဂလိပ် စာလုံးပေါင်း ၃၇၀၀၀ (သုံးသောင်း ခုနှစ်ထောင်) ကျော်၏ အဓိပ္ပယ်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
You can easily search over 37000 English words and their meanings in burmese.
ဤအဘိဓာန်ကို I-Myanmar Co., Ltd. (www.imyanmargroup.com) မှ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
This app is brought to you by I-Myanmar Co., Ltd. (www.imyanmargroup.com)
by acid lay
by zayyar lin
by Houng Khui shing
ဒီ dictionary ထုတ်​တဲ့သူကလည်း ​တော်​​တော်​​လေးကျွမ်းကျင်​တယ်​ထင်​တယ်​ မသိတဲ့ စာလုံး​လေး​တွေရိုက်​ရင်​လည်း ရှာမ​တွေ့ပါကြီးပဲ ​တော်​​တော်​ရီရတာပဲ ( server ​လေး​ရေးရှာကြည့်​​တော့ ရှာမ​တွေ့တဲ့ latter​လေး​ရေးရှာကြည့်​​တော့ရှိတယ်​ latterဆိုတာကအခု က​လေး​တွေအစအကုန်​သိတယ်​ တကယ်​ရီရတာပဲ ပညာရှင်​ကြီး​တွေ)
မြန်​မာTO ENGLISH မရဘူး မ​ကောင်းဘူး
Jedes Bautagebuch kann beliebig viele Bauberichte (z.B. einen Baubericht für jeden Tag) enthalten. Folgende Informationen können mit “Bautagebuch Mobile” erfasst werden: - Bauherr, Bauleiter und SiGeKo - Bauvorhaben - Witterung (Bewölkung, Niederschlag, Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) - Begehungsbeteiligte - Anwesende - Tagesleistun…
More by I-Myanmar Co., Ltd.
Download iMyanmar Dictionary